"13 Ary rehefa nasain’ i Pilato novorina ny lohan’ny mpisorona sy ny mpanapaka ary ny vahoaka, 14 dia hoy izy taminy: Entinareo at? amiko ity Lehilahy ity toy ny nampiodina ny vahoaka; ary, indro, efa nanadina Azy teto anatrehanareo aho, nefa tsy hitako izay helok’ity Lehilahy ity amin’izay iampanganareo Azy. 15 Tsia, na dia Heroda koa aza, fa namerina Azy hoy amintsika izy; ary, indro, tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty Azy; 16 koa hofaizako Izy, dia halefako. 18 Fa izy rehetra niantso mafy indray miredona nanao hoe: Vonoy Io, ka Barabasy no alefaso ho anay! 19 Nefa natao tao an-trano-maizina io Barabasy io noho ny fikomiana tao an-tanàna sy ny vonoan-olona. 20 Ary satria tian’i Pilato halefa Jesosy, dia niteny indray izy. 21 Fa ny olona niantso kosa ka nanao hoe: Homboy, homboy amin’ny hazo fijaliana Izy! 22 Fa hoy izy taminy fanintelony: Ka inona ary no ratsy nataony: tsy hitako izay helony tokony hahafaty Azy koa hofaizako Izy, dia halefako. 23 Fa niantso tamin’ny feo mafy ny olona ka nangataka hanomboana an’ i Jesosy amin’ny hazo fijaliana. Ary nahery ny feon’ ny olona. 24 Ary Pilato dia nandidy hanao izay nangatahiny. 25 Ary dia nalefany ilay natao tao an-trano-maizina noho ny fikomiana sy ny vonoan-olona, satria io no nangatahiny; fa Jesosy kosa natolony hataony araka ny sitrapony." Lioka 23:13-25
Ho faiziko Izy, dia halefako. Eto no ahitàna ohatra iray ny amin’ny tsy mahatanteraka ny fitsaran’olombelona: hofaizina ny amin’inona? Nampihodina vahoaka? Fantatry ny rehetra ny fon’ny Mpiandry ondry,feno fitiavana nananan’ny Tompo. Na Heroda na i Pilato samy tsy misy mahalaza izay ratsy azo hiampangàna an’i Jesosy Kristy…Raha raisina hoe malaza ho lehilahy henjana i Pilato, tokony afaka nahita zavatra hiampangàna azy ihany, saingy mazava izay voalaza (14, 22).
Kanosa. Toetra ratsy ananantsika olombelona izy io! Hita nivaingana tamin’ity fotoana ity, fa tao amin’i Pilato, ilay manam-boninahitra ambony teo amin’ ny fanjakana rômanina; ahoana no fitrangany? Tsy nisy herim-po hanohitra ny tsi-rariny, fa dia manaiky hilefitra amin’izay tadiavin’ny vahoaka. Raha ny lalàna rômanina, dia tsy manaiky na dia ny fikapohana ny olona tsy meloka, tsy manam-pahadisoana aza. Eto ary no ahitàna fa tsy mora ny mijoro amin’ny fahamarinana, ka sahy mivonona hanohitra ny tsy mety hita am-pahibemaso. Aoka hangataka amin’ny Tompo isika mba homeny herim-po sy fahazavan-tsaina, ka tsy ho tafalatsaka ao amin’ny fandriky ny toetra kanosa.
Fahafahana ho an’ilay mpikomy sy mpamono olona. Nandresy ny safidin’ny vahoaka: afaka i Barabasy! Raha raisina amin’ny fijery ara-teolojika, moa tsy efa hita sahady ny fizotry ny tantara? Nohafahana ny mpamono olona, maty nisolo azy kosa ny olo-marina. Fa tsy i Barabasy ihany no voakasik’izany fa izaho koa: mendrika ny fitsaran’Andriamanitra aho noho ny fahotako… saingy mahagaga ny fitiavan’ny Tompo, sahy nanolotra ny ainy hisolo heloka ahy sy hampihavana ahy amin’Andriamanitra (Rômanina 5:8-10).